Okugqamile alithandeki ukhanyise ubuso - inkinga eyinhloko abanikazi inhlanganisela isikhumba hlobo. Lena akuyona kuphela isici tebuciko, kodwa nakho kuyinkinga enkulu ngoba isikhumba, njengoba ngokweqile sebum clog pores kanye inhlamvu ukuvuvukala. Indlela ukuqeda sheen oily kanje ngobuso bakho? Ngaphambi kokuba siphendule lo mbuzo, kumelwe siqonde izimbangela zalesi yokuntuleka.
Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu of akhanye ebusweni
Ngokuvamile, le nkinga esingadala ukwephulwa ukuhlinzwa evamile kwezitho zangaphakathi kanye nezinhlelo. Ngakho, ngaphambi kokuba uqale noma yisiphi isenzo ukukulungisa, Uzodlula lapho ngihlolwa. Ngokusho imiphumela yokuhlolwa, udokotela ngeke linqume nokwelashwa uhlelo oluphelele, okuzokwenza usizo ukuqeda fat ubuso bakho bukhanye.
Imbangela evamile yenkinga:
Indlela ukuqeda le sheen oily ebusweni: imithetho yokunakekelwa
Yenza izinga nsuku skincare isimiso. Sebenzisa ekhethekile yokuhlanza agents nge pH hlangothi. Ungayisebenzisi amanzi kakhulu ashisayo okugeza kuwo.
Khetha abakhathalelayo kusho efanelekayo isikhumba sakho hlobo. Sebenzisa Matting lotions, abesesula, okhilimu. Bona kujwayeleke ukukhiqizwa sebum, okwenza kukhanye esikhumbeni cishe ezingabonakali.
exfoliating njalo izinhlayiya isikhumba esifile usebenzisa khuhla esithambile. Le nqubo hhayi kuphela ukuqeda namaqhubu futhi induna, kodwa futhi basize ukususa akhanye ebusweni.
Moisturize isikhumba sakho. Ngenxa yokushoda umswakama ukukhiqizwa ngcono sebum singenzeka. Uncamela ukhilimu ukukhanya gel-efana ukungaguquguquki.
Ukuthenga ithuluzi kokuthona, ayeke okukhethayo mkhiqizo nge ukuthungwa ukukhanya. Abanaso clog pores, emhlabathini omuhle buthuntu futhi wenze ukubukeka kwesikhumba enempilo.
Beka umkhawulo ukusetshenziswa okunamafutha, okuthosiwe, ngibhema ukudla okubabayo futhi amnandi. Mhlawumbe lena yiyona ndlela yokudla okungalungile imbangela eyinhloko isici okufana ukugcoba.
Indlela ukuqeda le sheen oily ebusweni ngosizo izindlela ngokurhaba: zisebenzisa yemvelo
ithoni kungemalengiso okukhazimulisa ubuso Iziphungo avuvukele amakhambi: calendula, uchungechunge, camomile. Zingasetshenziswa okugeza, kodwa ungakwazi ukulungiselela eqhweni futhi ekuseni ukusula isikhumba.
nomphumela omuhle ube buso azakhele izithako zemvelo ezifana iqanda omhlophe, imvubelo, kalamula, imikhiqizo yobisi.
I nezindlala sebaceous kungenziwa benganhlanhlathi usebenzisa eziguquguqukayo ukulibopha. Ukuze wenze lokhu, emanzini ashisayo cwilisa noma imbiza umhluzi ithawula imizuzu 5 wembatha ubuso. Khona-ke kushunqe isikhumba ngokushesha ukubeka ithawula ofakwe amanzi abandayo. Yenza le nqubo kumele kube izikhathi ezimbalwa, bese moisturize isikhumba ayisikhilimu.
Ngemva kokufunda lesi sihloko, okufundile nendlela ukubabulala sheen oily ebusweni. Ngokulandela lezi ziqondiso nokutlhogomela isikhumba sakho njalo, maduze sifinyelele elamukelekile.
Isikhumba ephakamisa izinkophe zamehlo - Ibuyisa amehlo ubuhle kanye nentsha
Ubuhlungu izingono ngesikhathi lactation
Amahhotela Kulinganiswe ngo emhlabeni - eziyishumi engcono.